Tag: ọpụpụ ahịa
N'oge a, ọgụ dị n'etiti Ahịa na Ahịa na-eyi egwu ntụgharị, nrụpụta ọrụ na omume mmụọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ahịa - ikekwe nke gị, ọbụlagodi. Amaghị nke a metụtara gị? Tụlee ajụjụ ndị a maka nzukọ gị: ownnye nwere akụkụ nke njem ahịa ahụ? Kedu ihe na-eme ka onye ndu ruru eru? Kedu ihe ịga nke ọma nke onye na-eduga-azụ? Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịza ajụjụ ndị a n'ụzọ doro anya, ntụkwasị obi na nkwekọrịta n'etiti ahịa na ire ahịa,
Ekwentị m na-ada ụda ụbọchị niile. Oge ụfọdụ m na nzukọ na ndị ahịa mana n’oge ndị ọzọ ọ na-anọdụ ala meghere n’elu oche m ka m na-arụ ọrụ. Mgbe ekwentị kpọrọ, ana m elegharị anya ma na-enwekarị 317 koodu mpaghara na-akpọ. N'ime ihe karịrị puku kọntaktị 4,000 na ekwentị m - ejiri ya na LinkedIn na Evercontact syn
Ihe omuma ihe omuma a site na Maximize Social Media mara mma n'ileputa ahia nke inbound dika uzo nke usoro ahia gi. Agbanyeghị, ọ bụ ihe nwute na ha họrọ itinye otu atụmatụ megide ibe ya karịa ịnye ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B na-ejikọ usoro abụọ a. Site na ijikọta ụzọ inbound na outbound na ahịa B2B, ịnwere ike ijide ma kaa akara gị na-eduga ka ha na ọdịnaya gị na mmekọrịta mmekọrịta na ịntanetị. Nke a na-enye